Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – गोर्खाल्याण्डको निम्ति विधायक होइन जीटीए हो बाधा – त्रिलोक देवान
Exclusive interview by: डी.के.वाइबा,
दार्जीलिङका विधायक त्रिलोक देवानले विधायक अनि गोजमुमो पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले आज कोलकोतामा विधानसभा अध्यक्षलाई आफ्नो विधायक पदबाट राजीनामा पत्र सुम्पेपछि गोजमुमो पार्टी अध्यक्षलाई पनि फ्याक्समार्फत राजीनामा पत्र पठाएको जानकारी दिएका छन्। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति आन्दोलनलाई अघि बढाउन पार्टीले विधायकहरूलाई राजीनामा दिनु मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङले आदेश दिएपछि आज उनले पार्टीकै आदेश अनुरूप विधायकपदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। यद्यपि पार्टीले राजीनामाको सन्दर्भमा आफूहरूलाई सभामा नबोलाई निर्णय लिएर अप्रजातान्त्रिक कार्य गरेको आरोप लगाउँदै पार्टीको हैकमवादी नीतिको विरोधमानै आफूले मोर्चाबाट राजीनामा दिएको स्पष्टिकरण पनि देवानले दिएका छन्। प्रस्तुत छ विधायक त्रिलोक देवानसित लिइएको टेलिफोनिक वार्ता –
1. तपाईंले विधायक अनि पार्टी दुवैबाट राजीनामा दिनुभएछ, किन ?
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरूङले विधायकबाट 18 सितम्बरको दिन राजीनामा दिनु भनेका थिए। पार्टीकै आदेश अनुरूप आज विधायक पदबाट राजीनामा विधानसभा अध्यक्षलाई सुम्पेको छु।
2. पार्टीबाट चैँ किन राजीनामा दिनुभयो ?
मैले विधायक सँगै पार्टीबट पनि राजीमा दिएको छु। किनभने विधायकहरूको राजीनामा सम्बन्धि जुन निर्णय लियो त्यस निर्णय लिनका निम्ति विधायकवर्गलाई सभामा बोलाइएन। जुन चाहीँ अत्यन्तै अप्रजातान्त्रिक हो। प्रथमत: यो निर्णय केन्द्रिय समितिको बैठकमा लिनुपर्ने हो अनि त्यस केन्द्रिय समितिको सभामा हामी विधायकवर्गलाई पनि बोलाउनुपर्ने थियो, तर बोलाएन। हामी राजीनामा दिन त्ययार थियौँ तर हाम्रो मता-मत लिँदै लिएन। यसको विरोधमा मैले राजीनामा दिएको हुँ। दोस्रो कुरा – यो राजीनामाको निर्णय लिँदा 11 सितम्बरको दिन चारवटा नगरपालिकाका पार्षद अनि सभासदहरूलाई बोलाएर लिएर निर्णय हो। उनीहरू तल्लो तहका नेताहरू हुन्। हामी विधायकहरू अलिक माथिल्लो तहका नेताहरू हौँ। तल्लो तहका नेताहरू माथिल्लो तहका नेताहरूको राजीनामा बारे कसरी निर्णय लियो। यो नितान्त अगणतान्त्रिक अनि उच्च हैकमवादी पार्टीको निर्णय हो। यसकारण पार्टीबाट राजीनामा दिएको हुँ।
3. पार्टीले तपाईंहरूलाई सभामा बोलाउँदैन ?
म पार्टीको प्रिन्सिपल एडभाइजर राखेको छ। तर, सभामा हामी बोलाउँदैन, कुरा पनि सुन्दैन। यसकारण किन एडभाइजर बस्ने भन्ने सोंचिरहेका थिए। हामी त हात्तिको दाँत जस्तो दुनियाँलाई देखाएर उहाँ चैँ हाम्रो एमएलए, आईएएस अधिकारी भनि जनतालाई हात्तिको दाँत जस्तै देखाएर सिटिङ रूमको एउटा सोभेनियर अथवा पपेट जस्तै, सजावटको सामाग्री जस्तो बनाएर राखेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी पार्टीमा बसिरहुँ ? यो सोंचेर मेरो पार्टीमा केही काम नै छैन, मूल्याङकन छैन। हामी किनारिकृत भएका थियौँ। यसकारण पार्टीमा बसिरहन उचित लागेन। भोलिको दिनमा जनताले हामीलाई नै प्रश्न गर्छन्। जनतालाई के उत्तर दिनु ? हाम्रो कुरा नेताहरूले सुने पो ! सभामा बोलाउँदैन तब कसरी हुन्छ ?
4. तपाईं त मुख्य सल्लाहाकार पनि हुनुहुन्थ्यो अनि दिल्ली र कोलकोता जाँदा प्रतिनिधी टोलिमा जानु हुँदैन थियो त ?
हो म पार्टीको मुख्य सल्लाहाकार हुँ अनि आईएएस अधिकारी पनि हुँ। तर पार्टीले दिल्लीमा डेलिगेसन लाँदा हामीलाई किन लाँदैन ? ड्राइभर लान्छ, पिउन लान्छ, चप्रासी लान्छ, ठेकेदार लान्छ तब दिल्लीमा कसरी डिसेसन हुन्छ ? मन्त्रीहरूले के भन्छ हामीलाई ? उनीहरूले त ठूला पढेका व्यक्तिहरू त्यहाँ राखेका हुन्छन्। धुपौरेहरू लगेर हुँदैन नि ! उनीहरूले वास्तवमा विधायकहरूलाई लान पर्ने हो । विधायकहरू भनेको पूल निर्माताण गर्नेहरू हुन्। हामी राज्यसित राजनैतिक पूल बनाउँछौँ। पूल त बनाउनुपर्योा नि ! उनीहरू पूल बनाउनको साटो भत्काउँछन्। तब कसरी हुन्छ ? यसकारण मैले अब पार्टीमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको देखे अनि पार्टी नै त्यागेको हो।
5. त्यसो भए गोजमुमो पार्टी भित्र कुनै प्रजातन्त्र छैन ?
छैन। कदापी छैन। अचानक सभा भनेर राती बोलाउँछ। सभाको एजेन्डा के हो भन्दै भन्दैन। कुरा पनि सुन्दैन। भाषण मात्र ठूलो हुन्छ। उसले जे भन्छ त्यो मात्रै सुन्न पर्छ। तब के को प्रजातन्त्र ?
6. विधानसभाबाट विधायकहरूले राजीनामा दिँदा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा प्रभावित हुन्छ ?
हेर्नुहोस, आज गोर्खाल्याण्डको निम्ति विधायक बाधा हुँदैछ कि जीटीए ? तपाईंहरू आफै भन्नुहोस त !
7. तपाईंको विचारमा के हो ?
विधायक कसरी बाधा हुन्छ गोर्खाल्याण्डको निम्ति ? विधायकहरू भनेको राजनैतिक पूल बनाउनेहरू हुन् तब कसरी विधायक बाधा हुन्छ ? गोर्खाल्याण्डको निम्ति बाधक त जीटीए बनेको छ। आज गोर्खाल्याण्डको निम्ति पहिला जीटीएका सभासदहरूले राजीनामा दिनुपर्छ। उनीहरू चैँ कुर्सीमा बस्ने ? आज उनीहरूले नै जीटीएमा काम गर्न दिएन भन्छन्। तीन वर्ष देखि चल्न दिएन भन्छन् । त्यसो हो भने जीटीएबाट राजीनामा दिनुपर्छ। यो नै गोर्खाल्याण्डको बाधाक हो। आफूहरू कुर्सीमा बसेर विधायकलाई मात्र राजीनामा दिनु लगाएर केही हुँदैन। ठिक छ विधायकले राजीनामा दिनुपर्छ तर त्यसभन्दा अघि सभासदहरूले जीटीएबाट राजीनामा दिनुपर्छ।
8. भविष्यमा कुनै राजनैतिक पार्टीमा जानुहुन्छ ?
अँह ! म कुनै राजनैतिक पार्टीमा जाँदिन। राजनीतिमा पस्ने मेरो कुनै आवश्यक्ता छैन।
9. मोर्चा अध्यक्षका वरीपरिका व्यक्तिहरू ठिक नभएको डा. हर्कबहादुरले भनेका थिए। के साँच्चै हो ?
हो बिमल गुरूङ ठिक छन्। उनका वरिपरिका व्यक्तिहरू ठिक छैनन्। उनीहरूले राम्रो सुझाव दिन सक्दैनन्। कुनै भिजन नभएका व्यक्तिहरूले राम्रो सोंच्नै सक्दैनन्। उनीहरूमा अनुभवको कमी छ। सुकुना सम्म भिजन राखेर हुँदैन। त्यसभन्दा बाहिरको दुनिया देख्न सक्नुपर्छ। त्यसो मान्छेहरू राखेर हुँदैन। धुपौरेहरू धेर छन्। त्यसरी पार्टी चल्दैन।
10. बिमल गुरुङलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
उहाँले आफ्ना छेऊ-छाऊमा राम्रो व्यक्तिहरू, राजनीतिमा ज्ञान भएकाहरू राख्नुपर्छ। धुपौरेका मात्रै होइन गणतान्त्रिक पद्धतिमा अरूका कुराहरू पनि सुन्न पर्छ। राम्रो मान्छेहरू कडा बोल्छन् पचाउनपर्छ। दवाई पनि त तितो हुन्छ नि ! पार्टीभित्र राम्रा मान्छेहरू छन् नजिक राखेर कुरा सुन्नु पर्छ। एकल निर्णय लिनुहुँदैन जसले पछिबाट खत्रा हुने गर्छ। आज विधायकहरूले राजीनामा दिएर पार्टीलाई जगाउने काम गरेको हो। भोलि विधायकहरूले गद्दार गर्योआ भनेर आरोप लगाउँलान्। तर उहाँले पनि आफ्नो छातीमा हात राखेर आफैलाई ऐनामा हेर्दै आत्मा मन्थन गर्नुपर्छ। पार्टीमा नै गल्ति हुँदैछ कि भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नुपर्छ। यति हो मेरो सुझाव ।
11. त्यसो भए बिमल गुरूङले राम्रा व्यक्तिहरू राखे पार्टीमा फर्कनुहुन्छ ?
अहँ ! फर्कन्दिन। म त सिनियर सिटिजन पनि भए अब पार्टीमा फर्कने कुरै आउँदैन।
1,137,702 total views, 1 views today
No harm in betraying the ‘betrayers’: Chettri GJMM accords Rohit Sharmaarousing welcome
22,984 total views, 1,377 views today
52,589 total views, 1,373 views today
68,821 total views, 1,375 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 68,826 total views, 1,373 views today Comments comments
68,826 total views, 1,373 views today
68,765 total views, 1,373 views today